खाना खाँदा किन राम्रोसँग चपाएर खानुपर्छ ? | सुदुरपश्चिम खबर
धेरैजसो मानिसहरु खानेकुरा कसरी खाने ? कति खाने ? भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरिदिन्छन् । अझ भनुँ, राम्रोसँग चपाएर खानुपर्छ भन्ने कुरालाई त त्यति ध्यान नै दिँदैनन् । तर पाचनक्रियाको लागि यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो । जब हामी पाचनक्रियाको कुरा गर्छौं, यसको प्रसङ्ग पेटबाट सुरु हुन्छ भनेर बुझ्ने गर्छौं । तर वास्तवमा खानेकुरा पेटमा नपुग्दै पाचन क्रिया सुरु भएको मानिन्छ । जब हामी मुखबाट खाना खान सुरु गर्छौं, सँगसँगै पाचन क्रिया सुरु हुन्छ । खाना चपाउन सुरु गर्दा मुखमा ¥यालसँगै पाचन इन्जाइम निस्केर खाना टुक्राउन सहज गर्ने गर्छ ।
योसँगै हाम्रो दाँतको संरचनाका बारेमा पनि थोरै ज्ञान राखौं । दाँतहरू चार किसिमका हुन्छन्–इन्सिजर, क्यानाइन, प्रि–मोलार र मोलार । धारिला र पातला अगाडिका दुईवटा दाँतहरु इन्सिजर हुन् । जसको काम भनेको खानालाई टोक्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, इन्सिजर सँगै जोडिएको दाँत हुन्छ एउटा क्यानाइन जसको काम चिथोर्ने हुन्छ । अरू रहेका मोटा चेप्टा दाँतहरूको काम भनेको खाना चपाउने हो । क्यानाइन मांसहारी जनावरहरूमा विकसित हुन्छ भने हामी मानिसमा त्यति धेरै विकसित हुँदैन । यसरी दाँतको संरचना अनुसार टोक्न र चपाउनका लागि मुख्यतः बनाइएका देखिन्छन् । खानालाई तरल अवस्थासम्म पु¥याउन समेत र पौष्टिक तत्त्वहरू राम्रोसँग शरीरले शोषित गरोस् भन्नका लागि समेत राम्ररी चपाएर खानुपर्छ ।
४) राम्ररी खाना चपाउँदा हाम्रो दाँत, गिजा, जिब्रो पनि स्वस्थ रहन सक्छ । यसैगरी, दाँतलाई अड्याउने हड्डी पनि मजबुत हुन्छ । खाना चपाउँदा निस्कने ¥याल र इन्जाइमले पनि मुखमा हुने किटाणुलाई सफा गर्छ । त्यसरी नै दाँतमा अड्केका खानाका टुक्रालाई हटाएर मुखलाई शुद्ध र सुगन्धित राख्छ । जब मुख ब्याक्टेरियामुक्त हुन्छन्, दाँत सड्ने, गिजा दुख्ने जस्ता समस्या पनि रहँदैनन् ।
हामीले खाने खानेकुरा मिलाएर खाएमा खाना नै औषधि हुन्छ र मिलाएर खान नजाने खाना नै विष बन्छ । हाम्रो शरीर बन्ने र बिग्रने हामीले खाएको खानामा र कसरी खायौं भन्नेमा भर पर्छ। शरीर निर्वाह गर्न र स्वस्थ रहन खाना चाहिन्छ। तर नमिलेको खानाले शरीरलाई हानि गर्छ। शरीरमा हुने अधिकांश स्वास्थ्य समस्या खान र पिउन नजान्दा हुन्छ। त्यसैले सधैं उचित खाना खानु पर्छ । हुन त खाना कति पटक चपाउने वा कसरी खाने भन्ने कुनै फर्मुला त हुँदैन । तर पनि खानाको किसिम र बनावट हेरी धेरै समय लगाएर राम्ररी चपाएर खानु नै फाइदाजनक हुन्छ । जबसम्म खाने कुरा चपाएर झोलजस्तै हुँदैन, तबसम्म चपाइराख्नुपर्छ र बिस्तारै यसलाई नै मानिसको बानीमा परिणत गर्दै लैजानुपर्छ। हतारमा खाएर पछि स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता आएपछि पछुताउनुभन्दा खानालाई बिस्तारै रमाएर स्वादसँग खाऔं । अनलाइनखबर बाट सभार
क्याप्चा हल गर्नुहोस् * 10 + = 14